Uzijonga njani izimvo kwi-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ulujonga njani uluvo kwi-twitter?
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 352
Unxibelelwano lwasentlalweni lube lolona nxibelelwano lubalulekileyo kula maxesha. Ukusuka phantse nasiphi na isixhobo onaso, nokuba yi-smartphone, ithebhulethi okanye iPC, unokufikelela kuzo.
Ngaphakathi kweqela lezona nethiwekhi zaziwayo nezisetyenzisiweyo, i-twitter ibonakala, ukwenza kube lula ukuba ungene kuyo kwaye uyisebenzise ukunxibelelana.
Inkqubo yayo ye-microblogging yaziwa kwihlabathi liphela ngokusebenza kwayo xa kuziwa ekusasazeni iindaba, iziganeko kunye nento eyaziwayo kwi-Intanethi "njengesihloko esihamba phambili". Le yokugqibela iye yangamandla e-twitter ngokuthelekiswa nezinye iinethiwekhi zentlalo.
Kwezi nethiwekhi zihlala zixubusha iingxoxo ezinxulumene nesihloko esivelise ukungavisisani okuninzi, umzekelo, imikhwa yangoku. Ngamaxesha amaninzi, ezi mpikiswano zinwenwela ixesha elide kwaye apho kungengamakhulu nje kuphela, kodwa namawaka abantu athatha inxaxheba.
Ezi ngxoxo zibhalwa kwicandelo lamagqabaza akhoyo kupapasho.
Amagqabantshintshi avela kwindawo ethile
Ukufunda ukuba ungayisebenzisa njani kolu papasho kwaye ufumanise yonke into enikwa abo bathatha inxaxheba kuyo.
Kuya kufuneka ulandele ezi zinto zilandelayo:
Kuyo nayiphi na inguqulelo ye-twitter inkqubo iyafana. Kuya kufuneka ungene eqongeni, nokuba usebenzisa isikhangeli sewebhu okanye usetyenziso kwaye ungene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Nje ukuba ungene, uya kuba nakho ukubona zonke iitweets kumgca wexesha. Skrolela kuyo ukuze ufumane i-tweet kunye nezimvo ofuna ukuzifunda.
Awuyi kuba nakho ukufikelela kumagqabantshintshi kumda wexesha, kodwa ii icon ezibonakala emazantsi eposi ziya kukubonisa ukuba zingaphi izimvo eziposiweyo. I-icon eyazisa wena imile njengeli lengxoxo.
Cinezela kumbhalo wopapasho. Ngokukhawuleza emva koko, i-tweet iya kukhula ibe nkulu, ithathe indawo ngakumbi kwiscreen. Okwangoku, ungafunda amagqabantshintshi ngokuskrolela ezantsi kwesikrini. Okukhona uskrolela, kokukhona unokufunda ngakumbi.
Ngokukwanjalo, amagqabantshintshi anokuxelwa, phantsi kwenkqubo efanayo, ngokungena kwi icon ehambelana nayo.
Inkqubo ebalulekileyo kukuqinisekisa ukukhankanywa kwakho kwi-twitter. Oku kukhankanywa kungqinelana namaxesha apho omnye umsebenzisi ephendule kwi-tweet oyenzileyo okanye kwizimvo ozenzileyo.
Ukuphonononga okukhankanyiweyo, kuya kufuneka uye kwi icon emile njengentsimbi ebekwe ezantsi kwesikrini. Nje ukuba ungene uza kubona amacandelo amabini. Ekhohlo lizakubonisa upapasho lwamva nje lwabanye abasebenzisi, abalandeli bamva osele ulufumene kunye namaxesha ongene kuwo kwezinye izixhobo, kunye nemihla yabo.
Icandelo elingasekunene lihambelana nokukhankanyiweyo. Apha, njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-twitter iya kukwazisa ukuba ngubani okhankanyileyo kwi-twitter, ngolwazi ngomhla wabo, kunye nezimvo ezithunyelweyo.
1 Ukusebenzisana rhoqo
2 Amagqabantshintshi avela kwindawo ethile
3 Kuya kufuneka ulandele ezi zinto zilandelayo:
Ndimvulela njani umntu kuFacebook?
Indlela yokuvala iTelegram?